Yini ubukhulu bokushisa? | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Njengoba sazi kahle, izinga lokushisa lapho sisukuma alifani nalelo eliqoshwe emini, lapho inkosi yenkanyezi iphakeme esibhakabhakeni. Lo mehluko wezinombolo ophakathi kwamanani aphansi kanye nobukhulu obonwe ngesikhathi esinikeziwe ubizwa ubukhulu bokushisa, futhi lisetshenziswa ekuphenyweni komoya nolwandle lwendawo ethile, ngaphezu kokusebenzela abalimi nabalimi.
Ngakho-ke lawa ngamavelu abaluleke kakhulu, ngoba ngenxa yokufunda kwabo singazi imininingwane eminingi ngezimo zezulu ezahlukahlukene.
1 Yimiphi imingcele ethinta ukuphakama kokushisa?
1.2 Ukuma kwendawo yendlela
2 Kuyini ukuhlukahluka kokushisa kokushisa?
3 Yini ubukhulu bokushisa ku ...?
Yimiphi imingcele ethinta ukuphakama kokushisa?
Inani le-amplitude eshisayo, eyaziwa nangokuthi i-oscillation eshisayo, lincike ezintweni ezilandelayo:
Njengoba inamandla aphezulu okushisa nokushisa kokushisa, kubangela ukwehla ebangeni lokushisa lansuku zonke nonyaka. Ngenkathi uqweqwe lomhlaba lubanda futhi lushisa ngokushesha, ulwandle lukwenza ngesilinganiso esincane, ngakho ezindaweni ezisogwini awukho umehluko omkhulu phakathi kwamazinga okushisa aphakeme naphansi, okuyinto eyenzekayo ezindaweni eziphakathi nezwe.
Ukuma kwendawo yendlela
Mayelana nokwakheka komhlaba, emithambekeni yezintaba i-oscillation eshisayo incane kunasemathafeni, ngoba yizindawo ezingachayeki kakhulu esimweni sezulu esingesihle.
Lapho ubukhulu besibhakabhaka bukhulu, ubukhulu be-amplitude buzoba buncane njengoba amafu emboze ilanga, ivimbela imisebe yayo ukuthi ifinyelele eMhlabeni.
Lapho usondelene kakhulu nezigxobo nenkabazwe, kwehla ubukhulu be-thermal. Ngokuphambene nalokho, uma usesifundeni esinesimo sezulu esipholile, izinga lokushisa eliphakeme kanye nezinga lokushisa eliphansi lingahluka kakhulu. (Sizobuyela kuleli phuzu kamuva).
Kuyini ukuhlukahluka kokushisa kokushisa?
Kuyinto ukushintshashintsha kwamazinga okushisa okwenzeka phakathi nesikhathi esishisayo sosuku nesibanda kakhulu ebusuku. Ukwahlukahlukana kokushisa kwamalanga kungaba kukhulu kakhulu ebusweni bomhlaba, njengasehlane, lapho u-38ºC noma ngaphezulu aqoshwa emini nasebusuku behlela ku-5ºC obandayo.
El izinga lokushisa kuyisici esibalulekile ekushintsheni kwethempelesha yasemini, futhi ukuthi lapho amandla elanga efinyelela ebusweni ekuseni, ungqimba olukhanyayo, oluphakathi kuka-1 no-3 cm, lomoya olungaphezulu nje komhlaba luyafudunyezwa ngokuqhuba . Ukushintshana kokushisa phakathi kwalolongqimba oluncane lomoya ofudumele nomoya opholile ngaphezu kwawo akusebenzi, kangangoba ngosuku lokushisa kwamazinga okushisa lungahluka ngo-30ºC kusuka ngenhla komhlaba kuye okhalweni. Imisebe yelanga engangena ehlobo iphezulu kunokushisa okuvele kungaphakathi kweplanethi kuleyo ndawo ethile, futhi isimo asilingani kuze kube ntambama.
Yini ubukhulu bokushisa ku ...?
Imephu yama-amplitudes ashisayo aseSpain
Njengoba sishilo, ukutadisha ubukhulu bokushisa kubaluleke kakhulu kwisayensi, kepha nakweminye imikhakha efana nezolimo noma ingadi. Akugcini nje ngokuthakazelisa ukwazi imininingwane eminingi ngezimo zezulu ezahlukahlukene, kepha ngenxa yalokhu kuzoba lula kakhulu kuthi ukutshala ezinye izitshalo noma ezinye, ngoba izinhlobo ezithile zikhula esimweni ngasinye sezulu. Ukuze, Ake sibone ukuthi yiluphi uhla lokushisa olukhona ngokwesimo sezulu:
Isimo sezulu se-Equatorial: amazinga okushisa aphezulu unyaka wonke. Izinga lokushisa eliphakathi lingaphezulu kuka-18ºC, futhi lingafinyelela phakathi kuka-20 no-27ºC. Kepha okugqame kakhulu umehluko omncane phakathi kwenyanga ebanda kakhulu nenyanga efudumele kakhulu: 3ºC noma ngaphansi.
Isimo sezulu esishisayo: Amazinga okushisa ahlala ephezulu unyaka wonke, ngakho-ke yisimo sezulu ngaphandle kobusika. Izinga lokushisa eliphakathi nenyanga ebanda kakhulu lingaphezu kuka-18ºC, kanti i-oscillation eshisayo ingafinyelela ku-10ºC.
Isimo sezulu saseMedithera: amazinga okushisa ahlala emnene cishe unyaka wonke, ngaphandle kwasehlobo lapho ephakeme kakhulu futhi angafinyelela kuma-45ºC. Isilinganiso sokushisa saminyaka yonke simayelana ne-14ºC, ngebanga lokushisa eliphakathi kuka-5ºC no-18ºC phakathi kwenyanga ebanda kakhulu nenyanga efudumele kakhulu.
Isimo sezulu sezwekazi: amazinga okushisa aphansi kakhulu ebusika, futhi aphakeme kakhulu ehlobo. Izinga lokushisa elijwayelekile lingaba ngaphansi njengo -16ºC. I-amplitude eshisayo inkulu kakhulu, ngaphezu kwama-30ºC.
Isimo sezulu sezintaba eziphakeme: ezintabeni izinga lokushisa liyancipha ngokuphakama, kepha noma kunjalo singasho ukuthi amazinga okushisa ebusika aphansi, akwazi ukufinyelela ku -20ºC, kanti lawo asehlobo aphansi. Ngakho-ke, i-oscillation eshisayo ingaphansi kuka-20ºC.
Isimo sezulu sePolar: amazinga okushisa ahlala ephansi noma aphansi kakhulu. Ubusika buhlala izinyanga eziyisishiyagalombili noma eziyisishiyagalolunye, kanti phakathi namasonto ambalwa lapho ihlobo lihlala khona, lidlula kancane u-0ºC. Ngobuncane obungaba ngu -50ºC, ubukhulu be-polar thermal bukhulu kakhulu, bungaphezu kuka-50ºC.
Futhi ngalokhu senziwe. Ngiyethemba ukuthi ufunde kabanzi mayelana ne-thermal amplitude 🙂.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Isimo Sezulu » Yini ubukhulu bokushisa?
Ngemuva kokunqoba kukaTrump, iChina ingahola iSivumelwano SaseParis